မြန်မာ-ထိုင်း ချစ်ကြည်ရေး အဖြစ် သံဃာတော်အပါး ၂ဝဝဝဝ ဆွမ်းဆန်စိမ်း လောင်းလှူပွဲ မန္တလေးမြို့တ? - Yangon Media Group
မြန်မာ-ထိုင်း ချစ်ကြည်ရေး အဖြစ် သံဃာတော်အပါး ၂ဝဝဝဝ ဆွမ်းဆန်စိမ်း လောင်းလှူပွဲ မန္တလေးမြို့တ?
မန္တလေး၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကကြီးမှူး၍ မြန်မာ-ထိုင်းချစ်ကြည်ရေးအဖြစ် မြန်မာအလှူရှင်များနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံဓမ္မကာယဖောင်ဒေးရှင်းတို့ပူးပေါင်း၍ သံဃာတော်အပါး ၂ဝဝဝဝ ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲကို မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့ နယ် (၇၈) လမ်း(ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း)ပေါ်ရှိ ချမ်းမြသာစည်လေ ဆိပ်တွင် ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်နံနက် ၆ နာရီမှစတင်၍ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”သံဃာတစ်ပါးကို နဝကမ္မဝတ္ထုငွေ ကျပ်သုံးသောင်းနှုန်း လှူဒါန်းသွားမှာပါ။ ကျန်တဲ့ငွေကတော့ အရုဏ်ဆွမ်းကပ်တာတို့၊ နေ့ဆွမ်းကိုဘူးနဲ့ထည့်ပြီး ကပ်လှူတာတို့ အခမ်းအနားပြင်ဆင်စရိတ်တွေ၊ လေယာဉ်ပျံကွင်းကြီးရှင်းလင်းရတဲ့စရိတ်တွေစတဲ့ အထွေထွေကုန် ကျစရိတ်တွေမှာသုံးစွဲထားပါတယ်” ဟု အခမ်းအနားကျင်းပရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ(မဟာမုနိဘုရားကြီး ဥက္ကဋ္ဌ)ဦးစိုးလင်းက ပြောကြားသည်။ သံဃာတော်အပါး ၂ဝဝဝဝ ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲသို့ သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသူရဦး အောင်ကို၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့် မောင်နှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှ အလှူ ရှင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
သံဃာအပါး ၂ဝဝဝဝ ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူရာတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ သံဃာ တော်များနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ သံဃာ တော်အပါး ၃ဝ ခန့်ကိုဆွမ်းဆန် စိမ်းလောင်းလှူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်သက်မှာ တစ်ခါကြုံရ သော ကုသိုလ်ပွဲဖြစ်သဖြင့် ကိုယ့်ဘာသာ၊ သာသနာအတွက် မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်ပွဲကို မဖြစ်မနေလာ ရောက်ကုသိုလ်ပြုခြင်း၊ လုပ်အားဒါနကုသိုလ်ပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သံဃာအပါးနှစ်သောင်း ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူခြင်းကိုတစ်ဦးတစ် ယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲ ယခုကဲ့သို့ အားလုံးစုပေါင်းကျင်းပခွင့်ရရှိခဲ့ခြင်း ကိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိကြောင်း လာ ရောက်ကုသိုလ်ယူသူတချို့ကဆိုသည်။
သံဃာတော်အပါး ၂ဝဝဝဝ ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံအလှူရှင်များက ကျပ် သိန်းလေးထောင်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံ အလှူရှင်များက ကျပ်သိန်းလေး ထောင်၊ စုစုပေါင်းလှူဒါန်းငွေကျပ် သိန်း ၈ဝဝဝ နှင့်အတူ အခြားအလှူရှင်များက လှူဖွယ်ဝတ္ထုပစ္စည်း အစုစုတို့ကို လှူဒါန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါဆွမ်းလောင်းပွဲတွင်သံဃာတစ်ပါးလျှင် နဝကမ္မဝတ္ထုငွေ ကျပ်သုံးသောင်းနှင့်အတူအရုဏ်ဆွမ်း၊ နေ့ဆွမ်းများ၊ လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ထိုင်း-မြန်မာသံဃာအပါး တစ်သောင်းဆွမ်းလောင်းလှူပွဲကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မြကျောက် ဆရာတော်ဦးဆောင်မှုဖြင့် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်က မန္တလေးမြို့ကျုံးဘေးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာ-ထိုင်းချစ်ကြည်ရေး အဖြစ် သံဃာတော်အပါး ၂ဝဝဝဝ ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲ မန္တလေးမြို့တွ
ရုပ်ရှင် ၂၆ ကားထဲက အိုက်တင်တွေကို ၁ဝ မိနစ်အတွင်း သရုပ်ဆောင်ပြတဲ့ ဂျူလီယာရောဘတ်
ရွှေဘောလုံးဆုကို ငါးကြိမ်မြောက် ဆွတ်ခူးပြီး မက်ဆီ၏ စံချိန်နှင့် စီရော်နယ်ဒို တူညီ
ကလေးဒေသ၌ မိုးရက်ဆက် ရွာသွန်းနေမှုကြောင့် မွေးမြူရေး ပျားပုံး ထောင်ချီ၍ မိုးနည်းသည့် ဒေသသို??
ဇူလိုင်လမှ စတင်၍ အထောက်အထားမဲ့ အလုပ်သမားများ ဖမ်းဆီးမည်ဆိုသော သတင်းကြောင့် တစ်ရက်တည်း မြန?